Ifektri Yokudla Kwesipulasitiki | I-China Abenzi Besiqukathi Sokudla Kweplastiki, Abahlinzeki
Isiqukathi sokudla se-Star diamond rectangle 1L LJ-3521
Isiqukathi sokudla sedayimane eliyinkanyezi i-LONGSTAR, senziwe ngempahla ebangeni lokudla, iphephile futhi inempilo. Ngokuqina kahle, indandatho yokufaka uphawu enezinhlangothi ezine evalwe kahle, uma igcwele isobho, ibingeke ithululwe. Ayikwazi ukumelana nokushisa futhi ingafudunyezwa yi-microwave, kodwa ngicela ungafaki isivalo kuhhavini we-microwave; Kubuye futhi kube yiqhwa, kungagcinwa esiqandisini, ukudla kungagcinwa kalula, futhi isiqandisi sihlanzekile futhi siqoqekile; Ingasetshenziswa kwikhabethe, i-microwave oven, ifriji ...
Isiqukathi sokudla se-Star diamond rectangle 2.1L LJ-3522
Isiqukathi sedayimane esiyindilinga sokudla esingu-320ml LJ-3523
ILONGSTAR star idayimane eliyindilinga lokudla eliyindilinga, lenziwe ngezinto zebanga lokudla, liphephile futhi linempilo. Ngokuqina kahle, indandatho yokufaka uphawu enezinhlangothi ezine evalwe kahle, uma igcwele isobho, ibingeke ithululwe. Ayikwazi ukumelana nokushisa futhi ingafudunyezwa yi-microwave, kodwa ngicela ungafaki isivalo kuhhavini we-microwave; Kubuye futhi kube yiqhwa, kungagcinwa esiqandisini, ukudla kungagcinwa kalula, futhi isiqandisi sihlanzekile futhi siqoqekile; Ingasetshenziswa kwikhabethe, i-microwave oven, isiqandisi ...
Isiqukathi sedayimane esiyindilinga sokudla 650ml LJ-3525
Isiqukathi sokudla esiyindilinga sedayimane 1.1L LJ-3526
Isiqukathi sokudla se-Star diamond rectangle 370ml LJ-3520
Isiqukathi sokudla kwesikwele sedayimane 1.7L LJ-3519
Isitsha sokudla sedayimane lenkanyezi i-LONGSTAR, senziwe ngempahla ebangeni lokudla, siphephile futhi sinempilo. Ngokuqina kahle, indandatho yokufaka uphawu enezinhlangothi ezine evalwe kahle, uma igcwele isobho, ibingeke ithululwe. Ayikwazi ukumelana nokushisa futhi ingafudunyezwa yi-microwave, kodwa ngicela ungafaki isivalo kuhhavini we-microwave; Kubuye futhi kube yiqhwa, kungagcinwa esiqandisini, ukudla kungagcinwa kalula, futhi isiqandisi sihlanzekile futhi siqoqekile; Ingasetshenziswa kwikhabethe, ku-microwave oven, esiqandisini naku-o ...
Isitsha sedayimane lesikwele sedayimane 900ml LJ-3518
Isiqukathi sokudla esikwele idayimane lenkanyezi i-LONGSTAR, senziwe ngezinto zebanga lokudla, kuphephile futhi kunempilo. Ngokuqina kahle, indandatho yokufaka uphawu enezinhlangothi ezine evalwe kahle, uma igcwele isobho, ibingeke ithululwe. Ayikwazi ukumelana nokushisa futhi ingafudunyezwa yi-microwave, kodwa ngicela ungafaki isivalo kuhhavini we-microwave; Kubuye futhi kube yiqhwa, kungagcinwa esiqandisini, ukudla kungagcinwa kalula, futhi isiqandisi sihlanzekile futhi siqoqekile; Ingasetshenziswa kwikhabethe, i-microwave oven, i-refrigerato ...
Isitsha sokudla sepulasitiki esikwele 370ml (S) LK-2008
Isiqukathi sokudla esiyisikwele se-LONGSTAR, senziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, kuphephile futhi kunempilo, futhi kulula ukusihlanza. Ingasetshenziswa kuhhavini we-microwave, amafriji, imishini yokuwasha izitsha nokuningi; Inokuqina okuhle, ukufaka indandatho enezinhlangothi ezine okuvalwe kahle.
Isitsha sokudla seplastiki esiyisikwele 860ml (M) LK-2009
Isitsha sokudla seplastiki esiyisikwele 1700ml (L) LK-2010
Isitsha sokudla seplastiki esiyisikwele 3000ml LK-2011